Droza - Wikipedia
Ny Droza dia vahoaka monina indrindra ao Atsinanana Akaiky, mitory fivavahana miozolmàna tsy manaraka izay arahin'ny maro (sampan'ny ismaelisma), ka ao amin'ny tapany atsimon'i Libàna sy ao amin'ny faritra afovoan'ny Tendrombohitra Libàna, ao amin'ny tapAny atsimon'i Siria (indrindra ao amin'ny faritra be tendrombohitr'i Hawran, izay fantatra amin'ny anarana hoe djebel Druze "tendrombohitry ny Droza"), ao amin'ny faritra avaratry ny Fanjakan'i Israely ao Galilea, ary eo amin'ny havoan'i Golàna. Ny anarana hoe Droza dia fanagasiana ny anarana arabo hoe درزي / durzī (milaza maro: دروز / durūz).
Ny fivavahan'ny Droza[hanova | hanova ny fango]
Ny fivavahan'ny Droza izay atao hoe drozisma, dia fampianarana filôzôfika miorina amin'ny fampianarana-fisedrana sady miompana irery ihany amin'ny fikatsahana ny lafiny miafina ao amin'ny fivavahana miozolmàna. Heverina koa fa ny drozisma, tamin'ny fiantombohany, dia sekoly ao amin'ny sampana ismaelianan'ny firehana miozolmànan'ny siisma. Ny fitiavana hiavaka amin'izany amin'ny alalan'ny fandaozana ny fampianarana silamo no nanova azy ho fiavahana hafa mahaleo tena.
Miafina ny fivoasany ny boky Kor'any sady tsy ambarany ny mpino izany raha tsy aorian'ny dingam-pisedrana maro. Mino ny fifindran'ny fanahin'ny maty amin'ny zavamananaina hafa. Ny andalana sasany ao amin'ny Kor'any dia matetika anaovany fivoasana manamarina ny fifindran'ny fanahin'ny maty amin'ny vatana velona hafa. Ohatra, ny Soràta 2:28 (Al-Baqara) manao hoe: "Ahoana no ahafanareo mandà an'i Allah nefa Izy no nanome anareo ny aina, raha tsy nanana izany ianareo? Dia hahafaty anareo Izy; dia hemelona anareo indray Izy ary farany dia Aminy no hiverenanareo".
Ny Droza dia mihevitra fa tsy fehezin'ny fitsipika sasany ao amin'ny sharia izy ireo, ka isan'izany ireo fitsipika momba ny fombafomba mipoitra avy amin'izany, nefa manana ny azy manokana izy ireo izay misy tsy fitoviany amin'ny an'ny fivavahana hafa toy ny kristianisma sy ny finoana silamo. Manana litorjia izy ireo nefa ireo mpino te hanokana ny fiainany amin'io fivavahana io ihany no manan-jo hamaky ny boky masin'izy ireo atao hoe Kitab al hekma ("bokin'hy fahalalana") ary ireo olona ireo dia tendrena ho Sheikh. Ny mpino hafa dia tsy manan-jo na dia ny hamaky na hijery voanteny iray ao amin'ilay boky masina. Ireo olona tsy manan-jo hamaky ny boky masina ireo dia tokony hanao vavaka tsotra alohan'ny hanatanteraka asa na fihetsika fanao andavanandro (toy ny misakafo, misotro rano na matory). Izany vavaka izany dia atao mba homba sy hiaro ilay olona Andriamanitra, ohatra amin'izany ny vavaka alohan'ny hatory izay atao mba hiarovan' Andriamanitra amin'ny fahafatesana, amin'ny nofy ratsy, amin'ny demony (na devoly) sy amin'ny zavatra rehetra mety handoza na hampijaly. Manana toerana fanaovana fanompoam-pivavahana koa ny Droza, izay hita saika manodidina ireo toerana onenan'izy ireo, ka ireo toerana ireo no atao hoe Makam (Ma'am) ary ny Droza ihany no afaka miditra ao. Ny Silamo dia mihevitra ny Droza ho manaraka finoan-diso (heretika), noho ny fananan'izy ireo finoana mifanohitra amin'ny an'ny silamo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Droza&oldid=997773"
Voaova farany tamin'ny 8 Oktobra 2020 amin'ny 12:34 ity pejy ity.